China KUDING SHAAHA iyo warshadeeyayaasha |Yibin Shaah
Shaaha Kuding wuxuu leeyahay udgoon qadhaadh, iyo dhadhan macaan.Waxay leedahay hawlo yaraynta kulaylka, hagaajinta aragga, soo saarista dareeraha iyo deminta harraadka, qoynta cunaha iyo yaraynta qufaca, yaraynta cadaadiska dhiigga iyo dhimista miisaanka, ka hortagga kansarka iyo gabowga ka hortagga.Waxaa loo yaqaan "shaaha caafimaadka leh", "shaaha quruxda", "shaaha miisaan lumis
Kudingcha, magaca daawada dhaqameed ee Shiinaha.Waa nooc ka mid ah geedka cagaarka ah ee Ilex holicae, oo caadi ahaan loo yaqaan Chading, Fuding iyo shaaha Gaolu.Waxaa inta badan lagu qaybiyaa Koonfur-galbeed Shiinaha (Sichuan, Chongqing, Guizhou, Hunan, Hubei) iyo Koonfurta Shiinaha (Jiangxi, Yunnan, Guangdong, Fujian, Hainan) iyo meelo kale.Waa nooc ka mid ah cabitaannada caafimaadka dabiiciga ah ee saafiga ah.Kudingcha waxay ka kooban tahay in ka badan 200 oo qaybood, sida kudingsaponins, amino acids, vitamin C, polyphenols, flavonoids, caffeine iyo protein.Shaahu wuxuu leeyahay udgoon qadhaadh, ka dibna qabow macaan.Waxay leedahay hawlaha nadiifinta kulaylka iyo yaraynta kulaylka, hagaajinta aragga iyo garaadka, soo saarida dareeraha iyo deminta haraadka, diuresis iyo xoogga wadnaha, qoynta dhuunta iyo yaraynta qufaca, yaraynta cadaadiska dhiigga iyo dhimista miisaanka, ka hortagga kansarka iyo ka hortagga kansarka, ka hortagga gabowga. iyo kicinta xididdada dhiigga.Waxa loo yaqaan "shaaha daryeelka caafimaadka", "shaaha quruxda", "shaaha miisaanka dhimaya", "shaaha ka hortagga hypertensive", "Shaaha cimriga dheer" iyo wixii la mid ah.Bacaha shaaha Kuding, budada shaaha ee Kuding, Lozenges shaaha Kuding, shaaha Kuding adag iyo cunto kale oo caafimaad.
meesha asal ahaan
Inta badan waxaa lagu qaybiyay Sichuan, Chongqing, Guizhou, Hunan, Hubei, Jiangxi, Yunnan, Guangdong, Fujian, Hainan iyo meelo kale.
Hawlaha iyo hawlaha Kudingcha waa la soo bandhigay.Waxay ka kooban tahay noocyo kala duwan oo ah amino acids, fitamiino iyo walxaha raadraaca sida zinc, manganese, rubidium, iwm. Waxay hoos u dhigi kartaa xuubka dhiigga, kordhinta socodka dhiigga halbowlaha, kordhinta sahayda dhiigga ee myocardial, nadiifinta kulaylka iyo nadiifinta, iyo hagaajinta aragga.Marka loo eego aragtida daawada dhaqameed ee Shiinaha, Kudingcha waxay leedahay shaqada dabaysha iyo kulaylka, nadiifinta madaxa iyo baabi'inta dysentery.Waxay leedahay saameyn cad oo daawo ah oo ku saabsan daaweynta madax-xanuun, ilig-xanuun, indho casaan, qandho iyo shuban.
Kudingcha waa qadhaadh iyo qabow, waxyeelo u geysata Yang oo dhaawacday beeryarada iyo caloosha.Waxay ku habboon tahay oo keliya dadka qaba kulaylka badan inay cabbaan, sida af qallalan, af qadhaadh, cawl huruud ah iyo jidh xoog leh, iyo dadka shubanku ku yar yahay waqtiyada caadiga ah.Dhab ahaantii, ma jiraan dad badan oo ku habboon cabbitaanka Kudingcha.Kuleylka nadiifinta indho la'aanta waxay dhaawici doontaa caloosha Yin, beeryarada Yang, oo xitaa waxay keentaa cillado dheefshiidka.
Taasi waa in la yiraahdo, dadka sida caadiga ah u fadhiya xafiiska, beeryarada iyo caloosha daciifka ah, dastuur xumo, dheef-shiid kiimikaad iyo waayeelka, jirro dheer, kuma haboona cabitaanka kudingcha qadhaadh badan.Mararka qaarkood dab culus, in kasta oo uu sidoo kale ku xumbo karo koob Xiehuo xagaaga, laakiin si aad u cabto xoogaa iftiin ah, in yar oo qadhaadh khadka ah.
Badanaa waxay ku koraan dhererka 400-800m ee dooxada, kaynta durdurka ama geedo yaryar.Waxay leedahay la qabsi ballaaran, iska caabin xooggan oo dhibka, xididdada horumaray, korriin degdeg ah, diiran oo qoyan, qorrax leh oo ka baqaya carrada, ku habboon qoto dheer, bacrin, ciid qoyan, dheecaan wanaagsan iyo waraab, pH5.5-6.5 ciidda, hodan ku ah humus. beeritaanka loam ciid;La qabso celceliska heerkulka sannadlaha ah ee ka sarreeya 10 ℃, ≥10 ℃ ka sarreeya heerkul urursan oo wax ku ool ah 4500 ℃, celceliska heerkulka ugu yar ee sanadlaha ah kama yara -10℃.Roobabka ayaa ka badan 1500mm, qoyaanka qoyaanka ee hawadu wuxuu ku koraa xaaladaha deegaanka oo ka badan 80%.Xaaladaha deegaanka koritaanka Kudingcha, ha ahaato heerkulka, iftiinka ama qoyaanka hawada, waxaa lagu xaqiijin karaa xaaladaha deegaanka ee meelaha la ilaaliyo.Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay in Kudingcha lagu sawiri karo beerashada meelaha la ilaaliyo ee waqooyiga Shiinaha.Gugii 1999-kii, Holly grandifolia waxaa laga soo saaray beerta chengmai wanchang kuding, gobolka chengmai, gobolka hainan, beerashada aqalka dhirta lagu koriyo in ka badan 4 sano, taas oo heshay faa'iidooyin dhaqaale iyo deegaan oo muuqda isla markaana urursaday khibrad beerasho isla waqti isku mid ah.
Dadka qaba qabowgu kuma habboona inay cabbaan, dastuurka yaraanta qabowgu kuma habboona in la cabbo, bukaannada caloosha ku jira ee daba-dheeraada kuma habboona cabitaanka, caadada iyo qaybaha cusubi kuma habboona in la cabbo.
Hore: Kuding shaaha caleen yar
Xiga: Shaah sinjibiil
Kuding shaaha caleen yar